Lacagta Qatar Ay Ku Bixisay Dhismaha Garoomada Koobka Adduunka Oo 17 Jeer ku Jibaarmeysa Miisaaniyada Soomaaliya Ee Sannadkan | Laacib.net
Lacagta Qatar Ay Ku Bixisay Dhismaha Garoomada Koobka Adduunka Oo 17 Jeer ku Jibaarmeysa Miisaaniyada Soomaaliya Ee Sannadkan
June 12, 2019 Balaleti 4
Tan iyo markii ay dowlada Qatar bilowday inay diyaariso garoomada iyo adeegyada kale ee loo baahan yahay Koobka Adduunka ee 2022, waxaa si weyn loo xiiseynayay in la ogaado qarashka ku baxaya howshaas baaxada weyn leh.
Isagoo sannadkan ka qeyb galayay shirka dhaqaalaha ee kagu qabtay magaalada St. Petersburg, Hassan Al Thawadi oo u sareeya gudiga diyaarinta adeegyada Koobka Adduunka ee Qatar awaxa uu yiri:
“Lacagta ku baxday garoomada iyo adeegyada kale waxa ay gaareysaa lix bilyan doolar. Waxaa intaas sii dheer inay jiraan mashaariic horumarineed oo laga wado guud ahaan wadanka iyo maalgashi dhismayaal oo iyagana loo isticmaali doono Koobka Adduunka.
“Hamigeena waa uu ka weyn yahay kaliya Koobka Adduunka. Waxaan dooneynaa inaan horumarino dalka, oo aan maalgashi ku sameyno dhismihiisa. Tusaale ahaan, waxaan uga faa’ideysaneynaa dhismaha adeega gadiidka iyo weliba sameynta tareeno casri ah. Faa’idada kale ee uu mashruucaan leeyaay waa fursadaha shaqo ee soo baxaya” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Lix bilyan doolar oo lagu bixiyo diyaargarowga Koobka Adduunka waa lacag aad u badan, haddii si kale loo dhigo waa 17 jibaarka miisaaniyada dowlada Soomaaliya ee sannadkan ay ku shaqeyneyso oo gaareysa 340 milyan doolar.
El Thawady waxa uu sheegay inay mar walba xiriir la leeyihiin Ruushka si ay khibrad uga helaan madaama Russia ay martigelisay Koobka Adduunka sannadkii hore.
Ilaa iyo haatan labo garoon aya la dhameystiray garoomada Koobka Adduunka ee Qatar.
Al Janoub ayaa si rasmi ah loo furay 16kii bishii May waxaaa lagu ciyaaray Koobka Amiirka ee Qatar. Garoonka kalee isna la dhameystiray waa Khalifa International oo la furay bishii May 2017.
Adiga ciyaaraha iyo arimaha Somali kala saar maxaa u bahdilee miisaaniyada dalka mise qadar ayaa u dhalatay
Hadalkan waxaan u arkaa hunqaaco🤮🤮😡
Waxaan u arkaa hadal aan ku haboonayn webka iyo arimaha sports ka maxaa Qatar iyo Somalia iyo dhaqaale isbarbar dhig keeney
nacala ku tal wax walbo Somali ayey ku so qadanaayan wa dad qalbiga ka dhintay